China Insulated Box Liner စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ Huizhou
သင်ပျက်စီးနိုင်သောအစားအစာများ၊ ဆေးဝါးများ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားအပူချိန် - အထိခိုက်မခံသောကုန်ပစ္စည်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် CooLiner သီးခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသေတ္တာများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လူမီနီယမ်သတ္တုပါးအိတ် / Insulated အပူအိတ်
CooLiner သတ္တုပါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပူဖောင်းအိတ်များကို ၂၄ နာရီအထိအေးခဲသောပတ် ၀ န်းကျင်အပူချိန်များမှရေခဲသေတ္တာများ၊ ပုံးအရွယ်အရွယ်တင်ပို့မှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အကြံပြုထားပါသည်။ Corrugated shipping box နှင့်အတူတကွအသုံးပြုသောအခါ CooLiner သည်ထိရောက်သောအကာအကွယ်ပေးထားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းသေတ္တာတစ်ခုကို ဖန်တီး၍ တန်ဖိုးနည်းသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်မှုအတွက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
သင်၏အပူချိန်အထိခိုက်မခံသောထုတ်ကုန်များကိုအေးခဲသောကွင်းဆက်ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်တစ်လျှောက်လုံးအပူလွန်ကဲမှုမှကာကွယ်ထားသည်ကိုသိရှိခြင်းသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သည့်ရာသီမဆို၊ သင့်လျော်သော 3D insulation အမျိုးအစားဖြင့်တင်ပို့ခြင်းသည် 'ထုတ်ကုန်ဆုံးရှုံးခြင်း' ကိုဆိုလိုသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ္တုပါး - ပူဖောင်းအပူစောင်များနှင့် pallet အဖုံးများ၌တွေ့ရသောအလားတူဆန်းသစ်သောနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ gusseted insulator တွင်သော box liners များသည်သင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်သီးခြားထားရန် passive energy ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။
1. insulator တွင်လည်း box ကို liner အအေးကွင်းဆက်တင်ပို့စနစ်အတွက်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်။ နာမ၌ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, တသမတ်တည်းအပူချိန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အအေးကွင်းဆက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းအပူချိန် - အထိခိုက်မခံထုတ်ကုန်ကိုင်ရန်ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်ကွန်တိန်နာကနေကာကှယျအတားအဆီးအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်။
2.Huizhou insulator တွင်သော box liner သည် EPE ပုလဲဝါနှင့်လူမီနီယံသတ္တုစပ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤပစ္စည်းနှစ်မျိုးဖြင့် Insulated Box liner သည်သင်၏ပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ရန်ကူရှင်တစ်ခုအဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးငွေရောင်လူမီနီယံသတ္တုပြားသည်အပူတောက်ပမှုကိုပြန်လည်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အလွန်သန့်ရှင်းသော၊ သင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကောင်းစွာသွားနိုင်သည်။
3.EPE ပုလဲချည်သည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောထုပ်ပိုးပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နူးညံ့ပျော့ပျောင်း။ အကာအရံမရှိ၊ ရေစိုခံနိုင်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်သင်၏ပစ္စည်းများကိုပြင်ပကမ္ဘာမှကာကွယ်နိုင်သကဲ့သို့၎င်းတို့ကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ပေါ့ပါးသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။
4.Huizhou ကအကာအကွယ်ပေးထားသော box liner သည်စာအိတ်ကဲ့သို့ 2D နှင့် 3D အိတ်တစ်လုံးကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်။
1.Huizhou Insulated Box liner သည်အိတ်ထဲတွင်အအေးနှင့်အပူကိုအပြင်ဘက်ကမ္ဘာမှအပူ ပေး၍ အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအပူချိန်ကိုထိန်းထားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
2. အများအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အသား၊ ပင်လယ်စာ၊ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပြင်ဆင်ထားသည့်အစားအစာများ၊ အေးခဲနေသောအစားအစာများ၊ ရေခဲမုန့်၊ ချောကလက်၊ သကြားလုံး၊ ကိတ်မုန့်၊ ဒိန်ခဲ၊ စသည်ဖြင့်
ကုန်ပစ္စည်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်အပူလွှဲပြောင်းခြင်း၊ လျှပ်ကူးခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများသုံးမျိုးအားဆန့်ကျင်သောအကာအရံပစ္စည်းများနှင့်ကာကွယ်ပေးသည်။
4. insulated box liner သည်အလွန်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီးသင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသဘောရှိသည်။
2D / 3D；
2.Block ဓါတ်ရောင်ခြည်, convection နှင့် conduction ။
3. သူတို့က insulator တွင်လည်း, ယိုစိမ့် - ဒဏ်ခံနှင့်ရေစိုခံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အလွန်သန့်ရှင်းသောကြည့်ရှုခြင်း, သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်အတူကောင်းစွာသွားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းခြောက်သွေ့ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
သတ္တုပါးအပေါ် 5.Customized အရွယ်အစားနှင့်ပုံနှိပ်။
gel gel နှင့်အတူ 6.Compatible ။
7. Multipurpose နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
1. အိတ်သည် 2D အဖုံးတစ်လုံးသို့မဟုတ် 3D အိတ်တစ်လုံးကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်၎င်းတို့အားစာတိုက်ပုံးတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြု၍ ပစ္စည်းများကိုတိုက်ရိုက်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
2. ဤအာကာသချွေတာသည့်ဒီဇိုင်းသည်ပုံမှန်ကတ်ထူပြားအတွင်းချက်ချင်းအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုဂျယ်ထုပ်များ (သို့) ရေခဲခြောက်များနှင့် တွဲဖက်၍ ကြာရှည်စွာထားရန်လိုအပ်သည့်အပူချိန်တွင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်တွင်သိုလှောင်ထားရန်လိုအပ်သည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမျိုးမျိုးသောနည်းပညာနှင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အတူလူမီနီယမ်သတ္တုပါးနှင့် EPE ပြုလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဥပမာ - အပူတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊
နောက်တစ်ခု: လက်ငင်း Cold Pack